I-El mal de Corcira: isitolimende sokugcina se-savil Bequacqua ne-Chamorro | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | 30/07/2021 02:25 | I-Biography, Abalobi, Inoveli emnyama
Ibiza, enye yezindawo zase-El mal de Corcira
Ububi bukaCorcira iyinoveli yombhali ovelele waseSpain uLorenzo Silva. Kukhishwe ngoJuni 2020, isitolimende sakamuva ochungechungeni oluhlonishwayo Bevilacqua futhi Chamorro. Nakulokhu futhi, njengenjwayelo, umbhali ushicilela kabusha ngemuva kweminyaka emibili isahluko esisha salolu chungechunge esaqala ngo-1998. Njengalezi ezedlule, kuyitulo lohlobo lwamaphoyisa.
USilva uvumile ukuthi ubehlale efuna ukukhuluma le ndaba, okuyisikweletu agcine asikhokhele nabafundi bakhe. Ngemuva kokushicilela umsebenzi wakhe, wathi: “Umphumela ukulethwa okubanzi kakhulu futhi mhlawumbe okuyinkimbinkimbi kakhulu ochungechungeni”. Kulokhu, ngaphezu kokuxazululwa kobugebengu, singafunda kabanzi mayelana nentsha ye-protagonist kanye nokuhlangenwe nakho kwakhe njenge-ejenti elwa nobuphekula.
1 Isifinyezo sika-El mal de Corcira
1.1 Icala elisha
1.2 Izimpawu zokuqala
1.3 Izindaba ezifanayo
2 Ukuhlaziywa kuka-El mal de Corcira
2.2.1 I-Rubén Bevilacqua (Vila)
2.2.2 U-Igor López Etxebarri
2.3 Izintshisekelo zika-El mal de Corcira
2.3.1 Ukulungiselela kombhali
3 Imibono ngo-El mal de Corcira
4 Mayelana nomlobi, uLorenzo Silva
Isifinyezo se- Ububi bukaCorcira
Abenzeli URubén Bevilacqua —Vila— noVirginia Chamorro, bazithola ngemuva kokubanjwa kwezigebengu ezithile. Ngalobo busuku, i-brigadista ilimele futhi yathunyelwa esibhedlela. Ngenkathi elulama, uVila uthola ucingo oluvela kuLieutenant General Pereira, omnikeza icala elisha. Ogwini lwaseFormentera, kuvele owesilisa oshonile okhumule izingubo walimala kabuhlungu.
Ngemuva kokuxoxisana nofakazi abaningana endaweni, ekuqaleni uphetha ngokuthi kungaba yicala lothando. Lokhu kungenxa yokuthi abaningi bathi babone isisulu sikanye nenye intsha ezindaweni ezinobungane e-Ibiza. Futhi, wayehlele ukuhlangana nendoda ngalobo busuku ogwini. Kepha, konke lokhu kuqagela kuyashintsha lapho bekwazi ukuthola ukuthi ngubani ongasekho.
Lona ngu-Basque Igor López Etxebarri, owayeyilungu leqembu le-ETA, owachitha isikhathi eside ejele eMadrid. Ngenxa yalesi sizinda, umyalo ophakeme unikeza uVila uphenyo ngokubulawa komuntu. Ukuze enze lokhu, kumele aye eGuipúzcoa, isifundazwe lapho uLópez Etxebarri ayehlala khona njalo, indawo uLieutenant wesibili ayazi kahle amashumi eminyaka.
Ngesikhathi sokuphenya, udlula ezahlukweni eziningana zempilo —Okomuntu siqu nomsebenzi kamufi, ukuze kucaciswe ngokubulala. Ngasikhathi sinye, uVila uyakhumbula ukuqala kwayo emabhalekisini e-Intxaurrondo, lapho elwa nobuphekula. Umenzeli ubuyela emuva ngesikhathi ngokukhumbula konke ukulungiselela abakutholile kokusebenza kanye nalezo zikhathi ezinzima zokusebenza.
Le ndaba iqhubeka kanjena, phakathi kokuhlangenwe nakho okwedlule nokwamanje komlingiswa onesibindi. Kuchazwa iziza ezahlukahlukene, phakathi kwabo, izikhathi ezinzima eSpain ngenxa yokuhlaselwa kwe-ETA, nokuthi uVila, eneminyaka engama-26 kuphela ubudala, wakwazi kanjani ukubhekana nabo kanzima. Ngesikhathi esifanayo, i-brigadista ixazulula icala eliyimfihlakalo elinikezwe lona.
Ukuhlaziywa Ububi bukaCorcira
Ububi bukaCorcira yinoveli enamakhasi angama-540, ihlukaniswe yaba Izahluko ezingama-30 kanye ne-epilogue. Lesi sakhiwo senzeka ezindaweni ezimbili: okokuqala esiqhingini saseSpain iFormentera de Ibiza, bese sidlulela eGuipúzcoa. Indaba ixoxwa kumuntu wokuqala ngumuntu oyinhloko yayo, enezincazelo ezinemininingwane nenembile.
I-Rubén Bevilacqua (Vila)
Ungumlingisi oyinhloko wochungechunge, indoda eneminyaka engu-54 eneziqu ze-psychology, ngubani usebenza njengommeli wesibili ku-Civil Guard. Ungowophiko lweCentral Operational Unit, iqembu eliphakeme ukuxazulula ubugebengu. Ungumenzeli oqondayo, oqaphelayo noqinile, ongaphuthelwa yimininingwane.
U-Igor López Etxebarri
Uyisisulu secala elinikezwe uVila, le ndoda ivela ezweni laseBasque futhi Wayengumhlanganyeli weqembu le-ETA. Ngenxa yezenzo zakhe, wavalelwa iminyaka eyishumi ejele laseFrancia nelase-Alcalá Meco eMadrid. Ngenxa yokwenqatshwa kozakwabo, wafihla inkanuko yakhe yezocansi iminyaka eminingi.
Kulesi sitolimende, uVila uzoba no-Álamo njengozakwethu — umenzeli odelelayo nongakhathali—, ngoba umlingani wakhe wamaphoyisa uphumule. Yize iChamorro ingeke isebenze ngokugcwele, uVila uzohlala enakekela ukuxhumana naye ngocingo. Okunye ukubamba iqhaza okuvelele okwe-brigadista Ruano, uchwepheshe onekhono futhi onobuciko obuningi.
Curiosities of Ububi bukaCorcira
USilva wayenayo le ndaba engqondweni selokhu kwaqala isaga ngeminyaka yama-90s.. Ngalesi sizathu, wenza uphenyo olunzima mayelana nobuphekula amashumi eminyaka. Kuyinkinga enzima ukubhekana nayo, ngoba iqembu lamaphekula i-ETA lidale umonakalo omkhulu kubantu nakuma-Civil Guard. Lapho iqembu selidiliziwe, umbhali ukwazile ukuqoqa ubufakazi kuma-ejenti nakubantu nje abasinda ngaleso sikhathi.
Ku-interview ku XL Masonto onke, USilva uzwakalise: "Kuze kwehlulwa i-ETA, iCivil Guard ayizange isidedele isibambiso. Ngisho nami. Futhi manje bangitshele yonke into ngokukhulu ukuphana ”. Umbhali unikele izahluko eziyishumi zencwadi kule ndaba ebucayi, esebenzisa okuhlangenwe nakho kwe-ejenti uBevilacqua, impi yakhe yamaphoyisa yokulwa nobuphekula nokunqoba kwakhe.
Imibono ivuliwe Ububi bukaCorcira
Kusukela yethulwa ngo-2020, Ububi bukaCorcira yamukelwe kahle ngabafundi, ababelindele ngokulangazela olunye uhambo oluvela kuma-ejenti uBevilacqua naseChamorra. Kuwebhu ivelele ngokwamukelwa okungaphezu kwama-77%, kanye namakhulu emibono emihle. Emsamo Amazon Inezilinganiso eziyi-1.591, lapho u-53% wayinika izinkanyezi ezi-5 kwathi u-9% wayinikeza ezi-3 noma ngaphansi.
Mayelana nomlobi, uLorenzo Silva
ULorenzo Manuel Silva Amador Wazalwa ngoLwesibili, ngoJuni 7, 1966 ewadini labakhulelwe esibhedlela saseGómez Ulla, esisedolobheni laseMadrid (phakathi kwesifunda saseLatina neCarabanchel). Ngesikhathi esemncane, wayehlala eCuatro Vientos, eduze nedolobha langakubo. Kamuva, wahlala kwamanye amadolobha aseMadrid, njengeGetafe.
Wathweswa iziqu njengommeli eComplutense University of Madrid futhi wasebenza iminyaka eyi-10 (1992-2002) eqenjini lebhizinisi laseSpain Union Fenosa. Ngo-1980 waqala ukudlala ngothando ngezincwadi, wabhala izindaba eziningana, ama-eseyi, izincwadi zezinkondlo, phakathi kokunye. Ngo-1995, wethula inoveli yakhe yokuqala: Novemba ngaphandle kwama-violets, kwalandelwa unyaka kamuva ngo Into yangaphakathi (1996).
Ngo-1997 i I-Nostalgia trilogy no: Ubuthakathaka bamaBolshevik, Ukulandisa okwashintshelwa ebhayisikobho ngo-2003 ngombhalo wombhali kanye noManuel Martin Cuenca. Ngo-2000 wethule omunye wemisebenzi yakhe ovelele kakhulu: I-alchemist engenasineke, isitolimende sesibili sochungechunge Bevilacqua futhi Chamorro. Le noveli yathola umklomelo kaNadal ngawo lowo nyaka.
e 2012, umphakathi Uphawu lwe-meridian -saga I-Bevilacqua ne-Chamorro—, ukulandisa okunqobe umklomelo wePlaneta (2012). Lolu chungechunge oluyimpumelelo selunezincwadi eziyishumi, eyokugcina kuzo Ububi bukaCorcira (2020). Ngalokho, umbhali wakhe umkhakha wokuqina wezincwadi, onamanoveli angaphezu kwama-30 ahunyushelwe ezilimini eziyishumi nambili, futhi esesifinyelele ngayo izigidi zabafundi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Ububi bukaCorcira